सुन्दै अचम्म ! वडाको बजेटले क्यारमबोर्ड खरीद
बाँके, १७ मंसिर । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–११ ले क्यारमबोर्ड खरीद गरी युवालाई वितरण गरेपछि अधिकांशले बजेटको दुरुपयोग भन्दै विरोध गरेका छन् ।
क्यारमबोर्ड पनि एक प्रकारको जुवा नै हो । क्यारमबोर्ड खेल्दा धेरै रकम बाजी थापेर समेत खेल्ने गरिन्छ । यसलाई सामाजिक विकृतिकै रुपमा पनि लिइने गरिन्छ । वडाध्यक्ष उज्ज्वलसिंह राठौरले क्यारेमबोर्ड खरिद गर्न रु एक लाख बजेट विनियोजन गरिएको र हालसम्म चारवटा टोलमा वितरण गरिएको बताए ।
क्यारमबोर्ड खेललाई ठूलो जुवा मानी प्रहरीले यस खेलमाथि नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएको छ । ‘सरकारकै लागि गलत पद्दति स्थापित हुन्छ,’ अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले भने, ‘वडाको बजेटबाट क्यारमबोर्ड खरीद गरी वितरण गर्नु जायज होइन । ’ रासस
बार्सिलोनालाई नेयमारको प्रश्नः लोयल्टी बोनस दिनुपर्दैन ?
काठमाडौँ, २७ मंसिर । बार्सिलोना फर्कने व्यापक सम्भावना रहेको चर्चा चलिरहँदा स्टार खेलाडी नेयमारले ३.५ मिलियन युरो दाबी गर्दै...
काठमाडौँ, २७ मंसिर । आज देशका केही स्थानहरुमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै...
काठमाडौं, २७ मंसिर । श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा झण्डै १२ हजार...